Ny fanadiovana Head printer miaraka amin'ny gamma-butyrolactone
Homeportfolio-Ny fanadiovana Head printer miaraka amin'ny GBL
Dingana atao amin'ny fanadiovana ny lohan'ny mpanonta
Dingana 1 - Esory ireo fiara mifono ranomainty sy lohan'ny mpanonta. Esory ny fiara mifono ranomainty avy amin'ny lohan'ny pirinty (mpihazona tanky) ary asio tombo-kase amin'ny hidin-zip na kitapo plastika azo fehezina. Atokàny, aleo atsangano tsara.
Esory avy eo ny lohan'ny mpanonta (dia nesorina). TOROHEVITRA: Mety te hanao pataloha latabatra ianao mba hanampy anao tsy handoto ny tananao.
Dingana 2 - Atsofohy ny lohan'ny mpanonta. Misy soso-kevitra marobe momba ny fomba fanadiovana ny lohan'ny mpanonta ary samy manana ny fiovan'ny sasany amin'ireto manaraka ireto:
Makà lapoaly kely sy malefaka ary apetraho takelaka na lamba roa ao ambanin'ny boaty mba hiarovana ny lohan'ny mpanonta.
Afanaina (amin'ny alàlan'ny microwave) ny rano voadio / tavoahangy ampy handrakofana ireo lamba famaohana taratasy. Azonao atao ihany koa ny mampiasa fangaro amoniaka 50/50 sy rano distily (eo ho eo amin'ny pinta no hatao). Afana mandritra ny iray minitra eo ho eo ny fangaro ao anaty micro-micro - TSY tokony hangotraka izy io.
Arotsaho moramora ny rano na mifangaro amin'ny lamba famaohana taratasy misy tsiranoka misy 1 / 2 santimetatra ao anaty vilany.
Apetraho ao anaty kaontenera eo ambonin'ny lamba famaohana ny lohan'ny mpanonta. Tokony ho hitanao fa mandeha ra ny ranomainty. Afindra amin'ny lohahevitra maromaro ny loha-pirinty (iray minitra eo ho eo isaky ny toerana) ary ahofiho moramora. Io no handrava ireo clogs an'ny ranomainty.
Raha marary mafy ny lohan'ny mpanonta dia avelao hilentika mandritra ny ora 3 amin'ny 4 mandritra ny alina. Azonao atao ny mamindra kely azy io amin'ny toerana hafa isan'ora na mahery
Dingana 3 - Atsipazo amin'ny rano ny lohan'ny mpanonta.
Mihazona ilay unit eo ambany rano mafana mafana. Apetaho amin'ny rantsan-tananao ny rantsan-tanana mba hamoronana ny tsindry mba hahafahanao mampiditra rano ao anaty vakivaky ny lohan'ny mpanonta. Tokony ho hitanao fa mihintsana ny basy. Ataovy izany mandra-pahazavana ny rano.
Dingana 4 - maina ny lohan'ny mpanonta ary soloina.
Esory ny unit ary sasao tsara amin'ny rano distated. Arotsaho maina izy io ary apetaho amin'ny lamba famaohana ravinkazo mba ho maina. (Ny sasany dia mampiasa volo maina eo amin'ny toerana ambany mba hahamaina ny lohan'ny mpanonta.)
Ampidiro indray ny lohan'ny mpanonta sy ny tanky. Ny mpanonta dia tokony hanao "Printer Head Alignment". Raha tsy izany dia ataovy amin'ny tanana ny “Printer Head Alignment” amin'ny alàlan'ny fampiasana ilay mpanonta. Manaraka izany, mihazakazaka tsingerin'ny fanadiovana lohan'ny mpanonta na roa aorian'izany fanontana lamina fanamarinana ny lozisialy hijerena ny fivoaranao.
Avereno araka izay ilainao izany.